Ole Gunnar Solskjær oo lagu taliyey inuu ka dul qaado kooxda Real Madrid badelka Paul Pogba – Gool FM
(Yurub) 12 Juun 2020. Laacibkii hore xulka qaranka Holland ee Ronald de Boer ayaa ku dhiiragaliyay macalinka reer Norway iyo kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær inuu la saxiixdo xiddiga qadka dhexe naadiga Ajax ee Donny van de Beek.
Qaab ciyaareedka Donny van de Beek ayaa soo jiitay kooxaha Real Madrid iyo Manchester United, waxayna doonayaan inay la saxiixdaan suuqa xagaaga ee soo socda, kaddib qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa uu ku soo bandhigay Ajax xilli ciyaareedkan.
Haddaba Ronald de Boer ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Fox Sports” wuxuu kaga hadlay:
“Marka aad maqasho in kooxahan ay ku xiiseenayaan, waan ogahay in wadnahaaga uu si dhaqso ah u garaacmayo, laga yaabee inaysan mar kale dhici doonin”.
“Haddii Real Madrid ay mar kale go’aansato inaysan xiiso u muujinin Donny van de Beek, waan fahmi karaa in ciyaaryahanka uu go’aansaday inuu ku biro kooxda Manchester United, waxaan fahansanahay in Los Blancos ay ka laba labeyneyso xoogaa yar”.
“Koox kale ayaa dhihi karta, waa ciyaaryahan xiiso leh, malaha waxaan ku heli karnaa qiimo hoose, tusaale ahaan Manchester United”.
“Ole Gunnar Solskjær wuxuu cadeeyay inuu doonayo inuu u dhaqaaqo jiho cusub, isla markaana uu doonayo ciyaartoy qunyar socod ah, qalbigoodana uu ku xiran yahay kooxda, waxay ila tahay, Waxaan u maleynayaa inuu ku daalay Paul Pogba, wuxuu doonayaa ciyaartoy sida Donny van de Beek”.